Maitiro Ekudzimisa Tsvaga Yangu iPhone - DZOSE DZINOGONA Nzira IPhone nhau
Ignatius Room | | iOS, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kurasikirwa ne iPhone yedu ndicho chinhu chakaipisisa chingaitika kwatiri nhasi, kune vashandisi vazhinji, kunyangwe kupfuura chikwama, sezvo isiri nyaya yekukosha kwehupfumi chete, asi mumakore achangopfuura yave mudziyo une ruzivo rwakawanda nezve isu, kuburikidza nemaapplication akasiyana ayo tibvumire isu toga kubata iyo data yemabhengi edu ebhengi, makadhi echikwereti, mapassword, zvitupa ...
Ipo iPhone payakatanga kuve mudziyo une hukama nenzvimbo yevanhu vaive nayo, kuba kwechigadzirwa ichi kwaive kukoshesa pakati peshamwari dzevamwe, chiri chinhu chakabiwa zvakanyanya muUnited States. Kudzivirira mbavha kubva pakutengesa zvishandiso zvakabiwa zvekutengesa zvakare, Apple yakadhonza Tsvaga yangu iPhone chimiro kumusoro kwayo sleeve, chinhu chinotibvumira kure dzinga iPhone yedu kuitira kuti ikwanise kushandiswa zvakare kunze kwekunge isu tine password yeakaundi iyo inosanganisirwa.
Kuburikidza neKutsvaga yangu iPhone basa, tinogona kuziva nguva dzese, inova nzvimbo yechigadzirwa chedu, kusanganisira yekupedzisira nguva iwe paunenge uine internet kubatana, rakanakira basa rekuti kana tarasikirwa naro kana kurikanganwa kumwe kunhu uye bhatiri racho rave kuda kupera.
Asi pamusoro pezvo, tinogona zvakare kutumira ruzha kuchinhu, chinhu chakanakira patinochirasa kumba, kungave pakati pemakusheni esofa, kamera kana mune chero kamuri asi isu hatigone kuibata. Asi basa rakakoshesa iro ratinoitirwa nebasa iri mukana wekuvharira mudziyo uri kure kuitira kuti pasave neanokwanisa kuwana yedu terminal kunyangwe iwe uchiziva iyo yekuzarura kodhi yacho.
Iyo iri kure yekuvharira sarudzo zvakare inotibvumidza isu kuratidza meseji mune iyo terminal kana isu tango vhara iyo kuitira kuti kuitira kana chaiko kurasikirwa kweiyo terminal, musamariya akanaka akamuwana unogona kutaura nesu kuti udzorere kwatiri.
1 Nei risiri zano rakanaka kudzima Tsvaga yangu iPhone
2 Nei ndichifanira kuidzima?
3 Maitiro ekudzima Tsvaga Yangu iPhone kubva ku iPhone
4 Disable tsvaga yangu iPhone kana ikasa batidza
5 Disable Tsvaga yangu iPhone kubva Windows kana Mac
6 Disable tsvaga yangu iPhone kugadzirisa
7 Disable tsvaga yangu iPhone isina password
8 Disable Tsvaga yangu iPhone kubva kuICloud
Nei risiri zano rakanaka kudzima Tsvaga yangu iPhone
Kugadzirisa Tsvaga yangu iPhone basa hakukurudzirwe, kunze kwekuda kwenyaya yekuti tichazotengesa chishandiso, tichazviona muchikamu chinotevera. Iri basa rinotibvumidza isu nguva dzese kuve nekutonga pamusoro pechinhu chedu, kutonga nacho tinogona kuzvivhara zvachose, ratidza meseji pachiratidziro nenhamba yedu yefoni kuti udzorere kwatiri, bvisa zvese zvirimo mukuwedzera pakuiwana, kusanganisira nzvimbo yekupedzisira isati yasara isina Indaneti.
Nei ndichifanira kuidzima?
Kururamiswa chete kwekukwanisa kuita kuti iPhone yangu isatsvage ndeye chete uye chete kana tichifanira kudzoreredza chishandiso patinozoenderera tichichitengesa, kuti chisazobatanidzwe neApple ID yedu. Muzviitiko izvi, chichava chishandiso pachacho kana iyo iTunes application iyo Izvo zvichatikumbira kuti tiibvise kana tichida kuidzorera kubva pakutanga.
Maitiro ekudzima Tsvaga Yangu iPhone kubva ku iPhone
Iyo inokurumidza nzira yekudzima Tsvaga yangu iPhone inogara iri kuburikidza neyacho kifaa, ingave iri iPhone, iPad, kana iPod touch. Kuti tiite izvi, tinoenda kuMenu yeMenu, tinya pane mushandisi uye tinya paICloud. Chidzitiro chinotevera chinoratidza ese maICloud masevhisi atakamisikidza pane yedu kifaa. Tinofanira kuenda kunotsvaga yangu iPhone uye fambisa switch kuruboshwe kuti iite kuti irege kushanda.
Panguva iyoyo iyo iPhone, iPad kana iPod touch inotibvunza, hongu kana hongu, pasiwedhi yedu iCloud nhoroondo, Pasina izvo hatife takakwanisa kumisa nzvimbo yeICloud sevhisi, saka unofanirwa kunge uine password iripedyo.
Disable tsvaga yangu iPhone kana ikasa batidza
Kana yedu iPhone yamira zvachose kushanda uye pasina nzira yekuiwana, usati waenda nayo kune technical service, isu tinofanirwa kumisikidza iyo Tsvaga yangu iPhone sarudzo. Kugona kuzviita, Tinofanira kuwana kuburikidza newebhusaiti icloud.com.
Kana tangopinza iyo data yeApple ID yedu, tinya pane Sarudzo yekutsvaga, uye sarudza chishandiso chatiri kuda kudzima Tsvaga yangu iPhone basa. Tevere tinoenda kumusoro kwekurudyi kwechidzitiro, uko zita redu rinoratidzwa, tinya pane kudonha pasi uye tinya iCloud Zvirongwa.
Dzvanya pane chishandiso icho chatinoda kudzima iyo Tsvaga yangu iPhone basa uye tinya pane x inoratidzwa kurudyi kwayo. Iyo webhu haizokumbire kusimbiswa uye kuti tinopinda pasiwedhi yechigadzirwa chedu zvakare. Kana maitiro acho apera, iyo Tsvaga yangu iPhone ficha ichave yatove yakaremara.
Disable Tsvaga yangu iPhone kubva Windows kana Mac
Apple haitipe chero chishandiso chekumisikidza iyo Tsvaga yangu iPhone, iPad kana iPod touch inoshanda zvakananga kubva kudesktop yedu kana palaptop, saka isu tinofanirwa kuzviita kuburikidza neICloud.com kuita nhanho dzakafanana izvo zvandakakuratidza muchikamu chakapfuura.
Disable tsvaga yangu iPhone kugadzirisa
Kana mudziyo wedu uine dambudziko, zvese zvekunze uye zvemukati, kungave iko skrini kana chinhu mukati, nhanho yekutanga yatinofanira kugara tichiita yekumisikidza Tsvaga yangu iPhone basa. Maitiro aya anodikanwa uye anosungirwa Apple inogona kutsiva chero chinhu chechigadzirwa uye gare gare ongorora kuti inoshanda kana dambudziko ragadziriswa. Kana tichigona kuwana chishandiso isu tinoenderera sezviri muchikamu Deactivate yangu iPhone kubva iPhone. Asi kana tisingakwanise kuibatidza, tinogona kuzviita kuburikidza neICloud.com ta uye sekutsanangura kwandakaita muchikamu Disable tsvaga yangu iPhone kana ikasa batidza.
Disable tsvaga yangu iPhone isina password
Iyo chete nzira yekumisa iyo Tsvaga yangu iPhone basa iri ine password yeedu iCloud account, pasina izvo hazvigoneke kuzviita, sezvo iri nzira yakakosha yekukwanisa kupedzisa maitiro. Kana ichigona kumiswa pasina pasiwedhi yeakaundi yedu iCloud, chengetedzo inopihwa neiri basa haizoite chero pfungwa.
Disable Tsvaga yangu iPhone kubva kuICloud
Kana isu tisina mudziyo wedu panyama kuti tikwanise kumisa iyo Tsvaga yangu iPhone basa, iyo chete nzira yekuita kudaro kuburikidza newebsite icloud.com, ndichiita zvakafanana maitiro andataura pamusoro apa muchikamu Disable yangu iPhone kana ikasa batidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima Tsvaga Yangu iPhone
Zvakanaka, ndakatenga yechipiri-ruoko iPhone 6 iyo yandaingoshandisa kwemazuva mashoma nekuti ndaive ndichiishandisa neicloud id yemuridzi wepamberi uye zvakanaka ndakadzorera fekitori foni uye ikozvino inondibvunza iyo apple apple iyo iyo iyo munhu akatenga foni Iye aingondipa iyo email asi haana kundipa password. Ndiani anondibatsira, handidi kurasikirwa nemari yangu, munhu akanditengesera akabva munyika uye handina hukama naye.
Izvo hazvindipe iyo sarudzo yekuremadza mashandiro e TSVAGA YANGU IPHONE paICloud.com, munzira yakaratidzwa pano.
zvimwe chete zvinoitika kwandiri 🙁
Ndine dambudziko, iphone yangu haishande uye pandakapinda icloud iro peji rinondibvunza ruzivo rwangu uye nekodhi yekuongorora, ndinofanirwa kuiona sei kana ndisingakwanise kuishandisa?
Kana iyo iPhone X, kana iyo Galaxy S9 uye kana iyo Galaxy Note 9. Iwo masensa ezvigunwe ari pasi pechidziro anoramba
Tora mukana we eBay's Super Weekend zvinopihwa zvevhiki rino